Ubushushu bedijithali base China Ukulinganisa inethiwekhi engabonakaliyo ye-infrared STP9CDITY-300 abavelisi kunye nabathengisi | Ilanga
Ubushushu kwidijithali Ukulinganisa inzwa engabonakaliyo ye-infrared STP9CDITY-300
I-STP9CDITY-300 lijelo elinye ledigital yentsimbi ye-infrared ye-thermopile sensor eyenza ukuba kube lula ukudityaniswa komlinganiso wobushushu obungadibaniyo kwizicelo ezininzi. Izindlu kwiphakheji encinci ye-TO-5, inzwa idibanisa inzwa ye-thermopile, i-amplifier, i-A / D, i-DSP, i-MUX kunye nomgaqo-nkqubo wonxibelelwano. I-STP9CDITY-300 yifektri ilinganiswe kumanqanaba obushushu abanzi: -40 ~ 125 ° C kubushushu bemo kunye -20 ~ 300 ° C kubushushu bento. Ixabiso lobushushu elilinganisiweyo ngamaqondo obushushu aphakathi kwazo zonke izinto ebaleni lokujonga inzwa. I-STP9CDITY-300 ibonelela ngokuchaneka okusemgangathweni kwe- ± 2 ° C ejikeleze amaqondo obushushu egumbi. Iqonga ledijithali lixhasa ukudityaniswa ngokulula. Uhlahlo-lwabiwo mali lwayo oluphantsi lwenza ukuba kulungele ukusetyenziswa kwebhetri, kubandakanya izixhobo zombane zasekhaya, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, i-HVAC, ulawulo lwasekhaya / ulawulo lwe-IOT.
Inzwa yedijithali ye-Infrared Thermopile ene-IC efundwayo eyenza amaqondo obushushu bento ngaphandle kwesidingo sokunxibelelana. Esi senzi sisebenzisa i-thermopile ukulinganisa amandla e-infrared akhutshwe kwinto elinganisiweyo kwaye asebenzise utshintsho oluhambelanayo kumbane we-thermopile ukumisela iqondo lobushushu. Le isivamvo ibhaqa ubushushu into -40 ℃ ukuba + 125 ℃ ukwenza ukusetyenziswa kuluhlu olubanzi isicelo. Ujongano lwe-I2C lusetyenziselwa ukunxibelelana nesi sixhobo kwizicelo ezahlukeneyo.
Isetyenziswa ngokubanzi ekungafumanekiyo kobushushu, njengokujonga ubushushu, imilinganiselo ye-Comfort Index, inkqubo yoLawulo lwaMandla, iiThermomitha, uKhathalelo lwezeMpilo; kunye nokuchongwa komzimba, njengokulawulwa kwamandla, ukulawulwa kweliso lencwadi, ulawulo lweyunithi yokukhanyisa, ukulawulwa kwepaneli yokubonisa.
Iziphumo zobushushu kwidijithali
Umzi mveliso ulinganiswe kumanqanaba obushushu abanzi
Inkqubo yonxibelelwano kunye nokudityaniswa ngokulula kunye
Ukuququzelela ukubalwa kwamacandelo enkqubo
150 μA Amandla asezantsi kunye no-2.5 ​​V ukuya ku-5.5 V Uluhlu lweeVoltage eziBanzi
Isixhobo sasekhaya esine-Non-contact contact control
Ukuchaneka okuphezulu komlinganiso wobushushu ongafumaneki
Egqithileyo Umphezulu Onyuswe ukungafowunelwa kobushushu kwi-Infrared Sensor STPSMD38
Okulandelayo: Indibaniselwano ye-ASIC AFE yeThermopile IR Isinxibelelanisi sovavanyo lokujonga ubushushu kwiThemometha STP10DF35G1
Infrared Thermopile woluvo
Smd Thermopile woluvo
Umphezulu Onyuswe Thermopile woluvo
Ubushushu Thermopile woluvo